Waxgarad ka tirsan beesha Mudulood oo ka soo horjeestay Imaam ay sheegeen in Muqdisho loogu duubay beelaha Banaadiriga | Anti-Tribalism
← Guddi Waqooyi iyo Koonfureed Soomaaliya
Urururka G10 oo ku talaabsaday horumar iyo talaabo ku dayasho mudadan. →
Waxgarad ka tirsan beesha Mudulood oo ka soo horjeestay Imaam ay sheegeen in Muqdisho loogu duubay beelaha Banaadiriga
10.04.2012 – Kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho waxgarad ka tirsan beesha Mudulood ayey kaga soo horjeestaan Imaam ay sheegeen in beelaha Banaadiriga shalay loogu duubay magaalada Muqdisho, waxayna xuseen in arintaas ay tahay mid ka baxsan qaab dhismeedkii lagu yaqaanay hogaanka dhaqanka beelaha Soomaaliyed.
Waxgaradkii kulankaas ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa Nabadoon Shire Dalfac oo sheegay in beelaha Banaadriga iyo beesha Mudulood ay yihiin beelo walaalo ah oo muddo dheer ku soo wada noolaa magaaalada Muqdisho, wuxuuna xusay in intii ay wada noolaayeen ay lahaayeen hogaano dhaqan oo midba kan kale uu ku ixtiraamo.
“Imaamka beelaha Muqdisho waxaa weligiis ilaa boqolaal iyo kumanaan sano iska lahaa iskana dhaxli jiray beesha Mudulood, beelaha Banaadiriga iyana waxa lahaayeen malaaqyo iyo oday dhaqameedyo kale oo caan ah, waxaana ka xunahaay in beelaha banaadiriga ay arintaas ku xad gudbaan sameystaana Imaam cusub oo la sheegay in shalay lagu caleemo saaray Muqdisho” ayuu intaa ku daray Naabdoon Shire Dalfac.
Nabadoonka ayaa sheegay in arintaas ay hormuud ka tahay wasaarada arimaha gudaha ee dowlada KMG Somalia oo uu xusay iney gadaal ka riixeysay iyagoo aan aqoon u laheyn ayuu yiri qaab dhismeedka odayaasha dhaqanka beelaha Soomaalliyeed, wuxuuna ugu baaqay iney arintaas ka waan toobaan.
Qaar ka mid ah nabadoonada beesha Mudulood oo kulankaas ka hadlay ayaa iyana sheegay in beesha Mudulood beel aan aheyn aysan Imaam u sameyn karin magaalada Muqdisho, iyagoo ugu baaqay odayaasha beelaha Banaadiriga iney gogol dhigaan raali gelina ka bixiyaan arintaas hadii aysan waxba kala socona mowqifkooda cadeeyaan.